Kuyaphela ngoZuma namhlanje, kusho amalungu e-NEC | News24
Kuyaphela ngoZuma namhlanje, kusho amalungu e-NEC
Mahlatse Mahlase & Tshidi Madia
Johannesburg - Amalungu eNational Executive Committee (NEC) ye-ANC kulindeleke ukuthi anqume ngekusasa likaMengameli Zuma kwezepolitiki uma esehlangana ngoMsombuluko ntambama, njengoba abantu abaningi kuleli behlalele ethembeni lokuthi uzofakwa amasondo.
Amalungu e-NEC afuna ukuthi lo mhlangano uphinde uqinisekise ukuthi uMengameli omusha wenhlangano uCyril Ramaphosa nguye ozongena ezicathulweni zikaZuma njengomengameli wezwe.
I-ANC ibize umhlangano ophuthumayo we-NEC kulandela izingxoxo ebeziqhubeka phakathi kukaZuma noRamaphosa.
Umhlangano oyisipesheli okwakumele ubanjwe ngoLwesithathu olwedlule wahlehliswa nguRamaphosa kulandela umhlangano aba nawo noZuma ngoLwesibili.
OLUNYE UDABA: Kubukeka sizothathwa namhlanje isinqumo ngoMengameli Zuma
Amalungu e-NEC funa lesi sigungu esiphezulu okuyiso esithatha izinqumo, sinikeze ikhokhasi yePhalamende igunya lokweseka ukuthi uZuma aketulwe ngevoti ePhalamende uma enqaba ukwehla emandleni.
"Kunezinhlelo ezimbili: kusasa [ngoMsombuluko] kuzoqhubeka izinhlelo ze-NEC. Ngemuva kwalolu hlelo kulindeleke ukuthi kube sekuhlukene inhloko nesixhanti - sizomketula," kusho ilungu le-NEC likhuluma neNews24.
"Kepha-ke abantu bavumelekile ukwenqaba uma bekhishwa esikhundleni, yingakho sidinga ukuthi kube nohlelo lwasePhalamende.
"Konke kuzofinyelela emphelandaba kusasa ngoba uma enqaba ukwesula, kuzophoqeleka ukuthi sithathe umgudu wasePhalamende."